Misaona Noho Ny Fahafatesan’ilay Senatera Alonso Lujambio Ny Meksikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2012 3:33 GMT
Ny maraimben'ny 25 Septambra 2012, namoy ny ainy tao Meksika ny Senatera Alonso Lujambio Irazábal. Nitantana birao maromaro ity mpahay politika sy mpianatra ambony manana ny maha-izy azy teny amin'ny oniversité ity, ohatra tamin'izany: Efa Fakan-kevitra tao amin'ny Ivon-toerana Federalin'ny fidianana (IFE) izy; Mpanolon-tsaina misahana ny rafi-pifidianana ho an'ny Antenimieran-dalampanorenana ao Iràka tao amin'ny Firenena Mikambana (UN); Filohan'ny Vaomieran'ny Ivon-toerana federaly amin'ny fahazoam-baovao sy ny fiarovana ny tahirin-kevitra [es] (IFAI); ary Talen'ny Sekretariàn'ny Fampianarana [es] (SEP).
Teo amin'ny tontolon'ny oniversite, profesora tao amin'ny sekoly nanabe azy i Lujambio, izay tsy iza fa ny Ivom-pampianarana Teknolojia Meksikana Mizaka Tena (ITAM), tao amin'ny Oniversite Ibero-Amerikana, sy tao amin'ny Oniversite Nasionaly Meksikana Mizaka Tena (UNAM).
Nahatonga ny Meksikana haneho ny alahelony sy ny fisaonany tao amin'ny Twitter ny fahafatesan'i Lujambio noho ny homamiadana.
Hoy ny filoha am-perinasa Felipe Calderón (@FelipeCalderon) [es] nanamarika:
@FelipeCalderon: Mandria am-piadanana ry namana Alonso, banga anao izahay. Arahinay ny ohatra tsara avy aminao toy ny fahendrena, fifaliana, fanetren-tena, fitiavan-tanindrazana, fitiavana sy ny fianana.
Ora fohy taty aoriana, nizara ny sarin'ilay senatora namoy ny ainy tamin'ireo mpanaraka azy ao amin'ny Twitter ny Tale Jeneraly.
Senatera Alonso Lujambio sy ny Filoha Felipe Calderón. Sary nozarain'i @FelipeCalderon tao amin'ny twitter.
@FelipeCalderon: Very olom-panjakana tena izy i Meksika, mpianatra ambony manana ny maha-izy azy, mpanao politika be fanetre-tena, ray mendrika, lehilahy mahitsy saina… pic.twitter.com/VZQEljXu
Nalahelo noho ny fahafatesany ihany koa ny filoha voafidy Enrique Peña Nieto (@EPN) [es] ka naneho hevitra toy izao manaraka izao:
@EPN: Malahelo aho noho ny fahafatesan'ny Senatera Alonso Lujambio, lehilahy miasa mafy ho an'i Meksika. Mirary fampiononana ho an'ny fianakaviany.
Nitatitra ny vaovao vao maraina, mpiserasera Ayeye (@ayeshabo) [es] nizara ny vaovao tamin'ny mpanaraka azy:
@ayeshabo: Eny, voalaza fa namoy ny ainy i Alonso Lujambio, mandria am-piadanana
Nofaritan'i Osvaldo Suarez (@paul_suco) [es] toy izao manaraka izao ny asa vitan'i Lujambio:
@paul_suco: Mandria am-piadanana Alonso Lujambio, natokany tamin'ny fanamafisana ny andrin'ny demokrasia Meksikana ny ankamaroan'ny androm-piainany.
Nanararaotra nampatsiahy i Jenaro Villamil (@jenarovillamil) [es] fa kandidà tamin'ny fifidianana filoha i Alonso Lujambio (miaraka amin'i Partido Acción Nacional), izay norobahin'i Josefina Vázquez Mota ny fandresena tamin'izany:
@jenarovillamil: Namoy ny ainy i Alonso Lujambio. Ny ady farany nitolomany: homamiadana, ny fahefana tafahoatra teo amin'i Elba Esther, ary ny fampielezan-kevitra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena feno hosoka
Mpanao gazety Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) [es] nanamarika fa herinandro maro lasa izay, nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny filoha Calderón i Lujambio:
@lopezdoriga: Vao tamin'ny Alarobia lasa teo, tonga nanome voninahitra farany an'i Alonso Lujambio ny IFAI, tarihan'ny filoha Calderón.
Araka ny tatitra avy amin'ilay bilaogera Sopitas [es], nandritra ny fankalazana ny Herinandrom-Pirenen'ny Fangaraharahana IX no nanaovana ny fanomezam-boninahitra farany an'i Alonso, hetsika arahin'ny Meksikana amin'ny alalan'ny tenifofotra #SNT2012 ary voatsikaritr’ ity bilaogera voalaza eto ambony ity tamin'ny alalan'ny fidirana bilaogy [es].
Mpanao gazety hafa, León Krauze (@Leon_Krauze) [es], nanamarika toetra hafa ananan'ity Senatora nindaosin'ny fahafatesana ity:
@Leon_Krauze: Mpahay tantara, mpanoratra tantaram-piainana, ary koa mpianatra momba ny haitrano, olona tsy dia mahazatra i Lujambio olona nahita fianarana ambony teo amin'ny sehatry ny politika.
Patricia Jinich (@PatriciaJinich) [es] naneho ny fahadisoam-panantenany tamin'izy nahare ny fahalasan'ny Senatera:
@PatriciaJinich Mampalahelo, mampalahelo, ô, tena vaovao mampalahelo. Mandriam-piadanana, Alonso Lujambio, profesora & mpanoro hevitra tsara indrindra manerantany. Ho banga anao izahay…
Tamin'ny 25 Septambra lasa teo no notontosaina ny fandevenana (amin'ny fomba amam-panao Meksikana, tsy fanao mandritry ny andro maromaro aorian'ny fahafatesany ny fandevenana, fa tonga dia halevina avy hatrany) ary tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, nisy ny vaovao tsy ofisialy nivoaka fa nodorana ny fatin'i Alonso Lujambio tamin'ny 26 Septambra 2012.
Hajian-tsarin'ny Senatera Alonso Lujambio nandritra ny Herinandrom-Pirenen'ny Fangaraharana IX. Sary avy amin'i J. Tadeo, nahazoan-dalana.
17 ora izayEl Salvador